Accueil > Gazetin'ny nosy > Raharaha Houcine Arfa: Mitana ny fanalahidy i Jean Louis Salles ?
Raharaha Houcine Arfa: Mitana ny fanalahidy i Jean Louis Salles ?
Isan’ny mbola ivon’ny ady hevitra etsy sy eroa ny momba an’ilay teratany frantsay, Houcine Arfa. Ny mpitondra fanjakana frantsay mihitsy no mitana ny fanalahidin’ity raharaha maloto ity, ary mahagaga ny tsy ahasahian’ny mpitondra fanjakana Malagasy mamaky bantsilana an’izany. Satria ve zanaka-antranon’i Lafrantsa ny mpitondra isan-tokony eto ka ezahina fadiana ny manakiana sy mitsikera ny ataon’ny mpitondra fanjakana frantsay amintsika?
Momba ny raharaha Houcine Arfa dia mazava ny resaka na iniana totofana aza. Ny tompon’andraikitra ara-pitsarana Malagasy moa dia nisy ny efa nanipika fa niezaka hatrany nanindry sy nanery ny manam-pahefana teto ny masoivohom-panjakana frantsay ny handefasana an’i Houcine Arfa eny amin’ny tobim-pitsaboana, satria hoe tsy salama. Tsy dokotera mpitsabo ny masoivoho frantsay amin’io fa noho ny maha-teratany frantsay an’i Houcine Arfa dia tsy maintsy ikatsahany vahaolana araka izay tratra ny tsy hanagadrana azy eto.
Raha nivoaka ny raharaha maloto rehetra dia mody nampandry adrisa ny Malagasy indray ny masoivoho frantsay eto hoe “efa mandray ny andraikitra tandrify azy amin’ny fiaraha-miasa amin’ny fitsarana Malagasy ny fitsarana frantsay”. Nisy koa ny filazan’ity masoivoho frantsay ity fa “tsy fanaon’ny fitondram-panjakana frantsay ny mandefa ny terataniny hotsaraina any amin’ny firenen-kafa”. Fampandriana adrisa, noho izany ny teny rehetra nataon’ity masoivoho frantsay ity, izay tsy tokony hadinoina fa izy no solontenan’ny fitondram-panjakana frantsay eto.
Omaly àry dia nivoaka ny nafenin’i Frantsa fa mba hiarovany ny voninahiny sy ny tombontsoany eto dia nailiky ry zareo any antsoroky ny samy Malagasy ity raharaha ity.
Nivoaka ny vaovao fa isan’ny nitana anjara toerana lehibe tamin’ny raharaha Houcine Arfa, nanomboka tamin’ny nampidirana an’ity “JIOLAHY FRANTSAY “ eto ity ilay teratany frantsay mpandraharaha manana trano fandraisam-bahiny any Nosy Be antsoina hoe “Jean Louis Salles” izay miseho sary eto.
Izy no nampifandray tamin’ny tompon’andraikitra ara-panjakana Malagasy an’i Houcine Arfa hatreny an-dapa, ary nanana ny teti-panorony koa izy tamin’izao fandosiran’i Houcine Arfa teto izao.
Anjaran’ny tompon’andraiki-panjakana Malagasy koa izany ny manohy ny famotorany sy ny fanadihadiany, hoe iza ny tompon’andraiki-panjakana malagasy niara-nitsikombakomba tamin’i Jean Louis Salles tamin’io fampandosirana an’i Houcine Arfa io teto.